Amanqaku kaFrank Bria Martech Zone |
Amanqaku ngu UFrank Bria
UFrank Bria yingcali yeeTikiti eziPhezulu. Waqala umsebenzi wakhe kwezorhwebo kwicandelo lobuchwepheshe beenkonzo zemali. Usebenze ngokuqala, abanye bethengisa ngamakhulu ezigidi zeedola, kwaye abanye batshiswa ngamalangatye. Amava akhe aquka ukunceda amanye amashishini amakhulu kumazwekazi ama-5 ukuba akhulise amashishini abo ngokwenza ifuthe lokwenyani kubathengi babo-kwaye ayiguqulele ekubeni ngumnikelo owothusayo.
Ngoku ujika loo mava kwicandelo lamashishini amancinci. Usebenza nabacebisi, ababoneleli ngeenkonzo zeshishini, kunye nezinye iingcali ukuze bashiye "iprojekthi esekwe" kunye nengeniso ngeyure- ixesha lokurhweba ngemali. Abaxhasi bakaFrank bakha amashishini abo malunga neenkonzo ezivelisiweyo apho ulisebenzisa khona ixesha lakho kubathengi abaninzi- hayi inye kuphela.
Ungumbhali wencwadi ethengiswa kakhulu kwilizwe lonke Isikali: Ungalikhulisa njani ishishini lakho ngokuSebenza ngokuNcinci. Uhlala eGilbert, eArizona kwindawo yasePhoenix kunye nenkosikazi yakhe kunye neentombi ezi-3.
Khuphela i-ebook kaFrank: Ukwakha iShishini leNkonzo: Iintsomi ezi-3 Zokugcina Uqhekezile
NgeCawa, nge-8 kaJanuwari 2017 NgeCawa, nge-8 kaJanuwari 2017 UFrank Bria
Omnye weyona mibuzo ndivayo yile: Uyazi njani ukuba ngowuphi umyalezo oza kuwusebenzisa kwiphepha lokufika okanye umkhankaso wentengiso? Umbuzo ofanelekileyo. Umyalezo ongalunganga uya koyisa uyilo olulungileyo, ijelo elifanelekileyo, kunye nokunikezelwa okuhle. Impendulo, ewe, ixhomekeka ekubeni liphi ithemba lakho kumjikelo wokuthenga. Kukho amanyathelo amane aphambili kuso nasiphi na isigqibo sokuthenga. Ungaxela njani ukuba liphi ithemba lakho